General Indhacadde “Qof kasta oo naga mida ayaa Shabaab u xukuman” | Dhacdo
General Indhacadde “Qof kasta oo naga mida ayaa Shabaab u xukuman”
General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) oo horey uga tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ayaa mar kale ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab.
General Yuusuf Maxamed Siyaad oo ka hadlayay aaska Axaddii shalay marxuum Cabdicasiis Afrika loogu sameeyay xabaalaha ku yaala Isbitaalka Xoogga ee Degmada Hodan ayaa sheegay in Shabaab looga adkaan karo, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay meel kaga soo wada jeestaan.
“Cabdicasiis, haddii uu taladooda ku dhimanayo 2012 ma soo dhaafeen iyo ka horba, laakiin Ilaahay baa oofsaday, qofkii dilay ee uu sababsadayna wixii dembi ah ee uu lahaa ayuu xambaaray.” Ayuu yiri General Indhacadde.
General Indhacadde ayaa yiri “Qof kasta oo naga mida ayaa nimankaa u xukuman, xukunkana Ilaahay ayaa iska leh. Nimanka diinlaaweyaasha ah kuligaynaa u xukuman, marka runtu waxay tahay waan wada xukumanahayee, nimanka ma iska dhicinaa oo Cabdicasiis waa tegay mise sida Cabdicasiis aan sugnaa in qofba mar lagu soo boodo, oo la isku qarxiyo. Su’aashu taas waaye.”
General Indhacadde ayaa tibaaxay inaanay Shabaabku tiro badnayn, itaal buurana lahayn, isagoona dadka ku booriyay inay la dagaalamaan maleeshiyadaasi.
“Nimankaanu ma badna, ma taya badna, ma tabar badna, ma diin badna, ma dadnimo badna, ma sharaf badna, ma wanaag badna, dadka ayay ugu liitaan. Aan nimankaas iska dhicino.” Ayuu yiri jananka.
General Indhacadde ayaa ka mid ahaa Janaraaladii Ciidanka Xoogga Dalka ee maleeshiyada Shabaab ka saaray Magaalada Muqdisho, toban sano horteed.